Basabisa ngokwenza iTheku lingalawuleki | IOL Isolezwe
Basabisa ngokwenza iTheku lingalawuleki
Isolezwe / 11 July 2012, 12:34pm /
UMPHATHI wamaphoyisa kaMasipala weTheku, uMnuz Eugene Nzama, izindaba zokubuyiselwa kwakhe emsebenzini zivuse itwetwe kosomatekisi. Osomatekisi bamsola ngokuthi ubamise kabi ebhizinisini labo. Isithombe: Sbonelo Ngcobo
BASABISA ngokwenza iTheku libe yindawo engalawuleki osomatekisi uma kuwukuthi umphathi wamaphoyisa kulo masipala, uMnuz Eugene Nzama, uyaqhubeka nokubahlukumeza.
Lokhu kuvele emhlanganweni oyisipesheli izolo wenhlangano yamatekisi i-KZN Transport Alliance (KZNTA) ethi iphoxekile ngokubuyiselwa kukaNzama emsebenzini.
Ngenyanga edlule uNzama unikwe umhlabakhefu oyisipesheli wezinyanga ezintathu yiMenenja kamasipala, uMnuz Sbu Sithole, ukuze aphenywe ngezinsolo ezibhekiswe kuye ngamaphoyisa awaphethe kanye nosomatekisi.
Ngemuva kwenyanga eyodwa emisiwe, uNzama ubuyiselwe ngoMsombuluko emsebenzini batwetwa embonini yamatekisi.
UNobhala we-KZNTA, uMnuz Bafana Mhlongo, uthe bakubheke ngeso lokhozi ukusebenza kukaNzama kodwa kuyochitheka gula linamasi uma kuwukuthi uyaqhubeka nokuqinisa isandla ebopha abashayeli nezimoto zabo ngendlela engacacile.
“Siluxoxe kabanzi udaba lokubuya kukaNzama ebesinethemba lokuthi uzokhonjwa indlela noma ayiswe komunye umnyango. Asiphathekile kahle ngesinqumo esithathwe umasipala ngalolu daba,” kusho uMhlongo.
Kwasuka uthuthuva eThekwini ngesikhathi osomatekisi benza le ndawo ingalawuleki izinsuku ezine kukhishwa ngesidlozane abagibeli ematekisini, kwacekelwa phansi impahla, kushaywa ngamatshe izimoto zomkhandlu okwaphetha ngokuthi kube nosomatekisi ababalelwa emashumini amane ababoshwayo.
UMhlongo uthe akukho muntu ofuna kuphinde kwenzeke le nto kodwa ukubuya kukaNzama aqinise isandla kuzobaphoqa ukuthi babuyele emgwaqweni.
Obebambe lesi sikhundla, uMnuz Vincent Ngubane, izolo ubuyiselwe emsebenzini wakhe kwa-Disaster Management emva kokuhoxiswa kwencwadi yokumisa uNzama emsebenzini enkantolo.
Okhulumela uMisapala weTheku, uMnuz Thabo Mofokeng, uthe uphenyo olubhekene noNzama luyaqhubeka ngoba ekugcineni bafuna kugezeke igama lakhe noma athathelwe izinyathelo uma kuwukuthi izinsolo abhekene nazo ziyamgojela.
“Ngemuva kokuphika kukaNzama ukuthi waba nomhlangano noSithole kwavunyelwana ngokuthi amiswe emsebenzini, abameli bakhe bathumela izincwadi befuna abuyiselwe esikhundleni sakhe. Asihlose kudicilela gama lamuntu phansi ngalolu phenyo kodwa sifuna kwenziwe ubulungiswa,” kusho uMofokeng.
UNzama usezwakalise ukuthi uzizwa engaphephile, impilo yakhe isengcupheni ngenxa yabathile abamcuphele umgogo ngemuva kokuthola ukungcola okwenziwa amakhansela, izikhulu zikamasipala, nabemboni yamatekisi.